Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Guriceel | Allbalcad Online
Home WARARKA Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Guriceel
Wararka naga soo gaaraya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in wali xaafaddaha magaalada uu ka socdo dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Ciidamo taageersan Ahlusunna.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii ciidamada dawladda ee kulaalayay magaalada ay damceen inay galaan xaafado ka tirsan Guriceel halkaas oo iska caabin ay kala kulmeen xooggaga Ahlu-Sunna ee horey gacanta ugu hayay Guriceel.
Labada dhinac ayaa wali ku dhex dagaalamaya magaalada iyadoona aysan jirin cid wali si buuxda ula wareegay gacan ku heynta magaalada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay gudaha u soo galeen magaalada ayna ka dagaallamayaan qeybo ka mid ah Xaafaddaha oo markii hore ay joogeen Ahlusunna.
Previous articleMadaxweynaha Jubbaland oo ka dalbaday guddiga doorashooyinka bilaabida doorashada golaha Shacabka
Next articleMareykanka oo duqeyn ku dilay hogaamiyihii sare ee Al-Qaacida ee Suuriya